Kulan Lagu Gorfeeyay Xidhiidhka Wasaaradda Diinta iyo Macaahidda Oo Hargeysa Lagu Qabtay | Somaliland.Org
Kulan Lagu Gorfeeyay Xidhiidhka Wasaaradda Diinta iyo Macaahidda Oo Hargeysa Lagu Qabtay
January 23, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org)-Kulankan oo ay ka soo qayb galeen 56 macalimin quraan oo ka hawlgala mederasadaha ku midoobay dalladda Towfiiq ee Islaamiga ah iyo mas;uuliyiin kale ayaa wasaaraddu u soo bandhigtay qorshe lagu midaynayo manhajka waxbarasho ee maadarasadahaasi iyo kuwa kale ee dalka ka jiraba.
wasiirka wasaaradda Diinta iyo awqaafta Md Sh Khaliil Khaliil Cabdilaahi Axmed oo kulanka ka qayb galay ayaa ka qaybgalayasha uga waramay sida ay mas’uuliyadda uga yihiin barbaarinta ubadka iyo dhalinyarada ay u gutaan waajibaadka ka saaran gudashada mas’uuliyadaasi maadaama buu yidhi wasiirku ay shareecadeena islaamku adkaysay amaanada iyo mas’uuliyadeeda.
Md khaliil oo ka hadlayey faa’iidada ay leedahay wada jirka yo isku xidhnaanta wasaaradda diinta iyo machadyada waxbarasho ee diiniga ah ay keenayso in dalka ay u soo baxaan ubad xambaarsan aqoon ku qotonta qayimka bulshadeena.
wasiirku waxa uu shahaado sharaf halkaa ku gudoonsiiyey Gudoomiyaha Dalladda waxbarshada ee Towfiiq, Cabdikariin Muuse Guuleed taasoo ay dalladu ku mutaysatay xidhiidhka joogtada ah ee ay la leedahay wasaaradaha diinta iyo waxbarashada iyo weliba sida ay u raaceen manhaj waxbarasho oo lagu kalsoon yahay.
Kulankaas waxaa sidoo kale ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda diinta Md Cabdirashiid Sheekh iyo gudoomiyaha hay’adda qarni-Ifriiqiya Sh Maxamed Cali Geeddi ayaa iyaguna sheegay in wasaaradda diinta iyo awqaaftu kulamada noocan oo kale ah ay ku dhiirrigelinayso hawsha taacliimeed iyo ta barbaabrineed ee jiilka mustaqbalka u soo kacaya umadda reer Somaliland.
Gebagebadii Gudoomiyaha dallada waxbarashada ee Towfiiq Md Cabdikariin Guuleed oo halkaa ka hadlay ayaa ballanqaaday in ay sii wadayaan horumarinta waxbarashada ay gacanta ku hayaan kulamada noocan ahna ay yihiin tallaabo hore loo qaaday, tixgelina ay u hayaan wasaaradda waxbarashada oo si rasmi ah u diiwaangelisay.
Previous PostSomaliland independent press is still immature and filthy!!!Next PostXukuumadda Somaliland oo Shaqaalaha dawladda Fasaxday munaasibadda Mawliidka Nabiga (NNKHA) Darteed	Blog